WWE Nhoroondo Vol. 14: Slam Inonzwika Pasi Pose. - Wwe
WWE Nhoroondo Vol. 14: Slam Inonzwika Pasi Pose.
Pamberi pechaunga-chinogadzika vanhu kuWrestleMania III, Hulk Hogan muviri wakarova Andre the Giant kuti achengetedze WWE World Heavyweight Championship. Izvo zvaizopedzisira zvachinja kumeso kweyekurwa nhoroondo zvachose.
Wrestling inzira yakasarudzika yevaraidzo mune iyo kana kazhinji ichidzokorora yayo nhoroondo. Semuenzaniso, kutungamira kune inozivikanwa 'Ini Kurega' Mechi pakati Terry Funk uye Zvisikwa Mukomana Ric Flair paClash of the Champions IX, vazivisi vacho vakati hapana kana murume akambotumira kana kubaya. Izvi zvaive kunyangwe hazvo chokwadi chekuti Flair anga aonekwa achitaura achipa kuna Ricky 'Dhiragoni' Steamboat panguva yeTwo Out Of Three Falls Match mwedzi yakati wandei yapfuura.
Zvakawanda zveizvi zvakaitika kakawanda munguva yakapfuura nekuda kwenzvimbo yedunhu system. Semuenzaniso, dai Rocky Johnson anga achangobva kutamira kunharaunda nyowani vanosimudzira vaisazotaura kuti akarasikirwa nemutambo naAbdullah the Butcher mudunhu rake rekare.
handinzwe sekunge ndiri wangu
Hazvishamise, kana chimwe chinhu chinyorwa, icho kukwikwidza kukwidziridzwa senge kudzokorora nhoroondo nekuda kwekugadzira rondedzero nyowani. Iyo indasitiri yemamuvhi yeHollywood inoita izvi futi, neyakagara yavo reboots uye inogadzirisazve.
Andre weGiant paakangoitirwa chibvumirano neWWE mukutanga kwema1980, kambani iyi yakasundira imwe rondedzero: Andre the Giant akange asati amborohwa muviri, kana kuti akange akundwa zvakachena nemumwe muvengi.
Muchokwadi, varume vazhinji vakarova Andre, saBig Cat Ernie Ladd naStan Hansen. Zvakare pane izvo zvinyorwa aive Hulk Hogan, uyo akange arova Andre mune kumwe kukwidziridzwa.
Rondedzero yeWWE yakaramba yakanamatira, zvikuru nekuti Rock 'n' Wrestling Connection yakavaita kusimudzira kwepasirese, uye yakadhonza vateveri vazhinji vatsva vaive vasingazive neyekare nharaunda.
sei kushomeka kushoma muhukama
Iyi ndiyo nyaya yemutumbi wakanzwa pasi rese, apo Hulk Hogan akatarisana naAndre Giant kuWrestlemania III.
Iyo Inovaka Up: Iyo $ 15,000 Muviri Slam Dambudziko.
Andre anorovera mumwe murume hombe Big John Studd mumuviri slam dambudziko mechi.
Kana iwe uchinetseka kuti kunaka sei kubhucha kwaive panguva yeWWE's classic era, funga izvi; WWE yakatanga kuvaka ichienda kuWrestlemania III MAKORE pamberi penguva.
Apo Terry Bollea AKA Hulk Hogan akatengeswa kuWWE kubva kuAWA, akagadzwa kuve nyeredzi hombe yekambani. Vince McMahon aiziva kuti pane imwe nguva kwaizofanira kuve nemutambo pakati paAndre the Giant - zvine mutsindo nyeredzi huru yekurwa muma1970 - naHogan, uyo akagadzwa kuve nyeredzi hombe kuma1980.
WWE yaida kudarika pfungwa yekuti Andre aive hofori isingakundiki yaisakwanisa kurohwa. Kusvikira izvozvi, Andre akanyoreswa muchirongwa aine hofori hombe Big John Studd. Izvo zvese zvakatanga apo Studd nemaneja Freddie Blassie akapa zviuru gumi zvemadhora kune chero murume aigona kurova murume mukuru.
Mavhiki akapfuura uye hapana akakwanisa kupindura zvinetswa, kusvikira Andre the Giant arova ringi. Andre akange oda kurova waaikwikwidzana naye apo Studd akabata tambo dzemhete kuti azviponese.
Iyo feud yakaguma paWrestlemania yekutanga, uko matanda akaunganidzwa kusvika zviuru gumi nezvishanu zvemadhora. Mushure mekumbundikira kwenguva refu, Andre akasimudza Studd ndokumurova zviri nyore asati atambidza mari kune vateveri pamhete.
Andre akange atanga kutonga, uye rondedzero yaive yekuti kana Big John Studd aisakwanisa kurova Andre, saka ndiani mumwe aigona?
Icho chaive chakanyatsofungidzirwa kuvaka-up icho chaitengeswawo zvakafanira kupinza kuda kuziva mundangariro dzevateveri pane ndiani aigona kuradzika Andre.
kuita nharo kune hukama muhukama
ane makore mangani ric flair iye wrestler
ndiri kudanana naye here
ndinoda kuchema asi handigone
rick uye morty mhepo nguva